ISportStake 8 Umdlalo waseNingizimu Afrika
Ikhaya / isiqondisi se-lotto sase-ningizimu afrika esiku-inthanethi / isportstake 8 umdlalo waseningizimu afrika | idlalwa kanjani i-sportsstake 8
ISportStake 8 Umdlalo WaseNingizimu Afrika | Idlalwa kanjani i-SportsStake 8
ISportstake 8 ngumdlalo owenziwa yi-ITHUBA National Lottery. Kufanele ubikezele imiphumela yesigamu sokuqala neyesibili yemidlalo yebhola likanobhutshuzwayo eyisishiyagalombili. Uhlu lwemidlalo osemthethweni luthathwe kumaligi ebhola elikhokhelayo ikakhulukazi eNingizimu Afrika, e-United Kingdom, eSpain, eJalimane, eFrance nase-Italy.
Kunezindlela ezintathu ongadlala ngazo.
1. Isiliphu Sokubheja: Thola isiliphu esisemthethweni sokubheja kumthengisi ovunyelwe, usigcwalise ngesandla bese usithumela eTheminali. Ungacela umthengisi ukuthi afake ngqo okukhethile ku-Terminal. Kuzofanele ukhokhe eTheminali.
2. QAPHELA: I-Terminal izokwenzela izinqumo futhi ikhiqize ngokuzenzakalelayo isiliphu sokubheja. Le nqubo ifaka ukuhlanganiswa kwekhanda lezibalo ukuya emlandweni wamaqembu amabili nokukhethwa okungahleliwe. Inkokhelo izokwenziwa eTheminali.
3. IWebhusayithi: Ungabhalisa ku-nationallottery.co.za bese ulandela imiyalo elula oyinikiwe. Inkokhelo izokwenziwa online.
Kufanele wenze ukubikezela okungenani okukodwa engxenyeni ngayinye yomdlalo ngamunye. Isiliphu esisodwa sokubheja esigcwele sizoba nokuqagela okungenani okungu-16 sekukonke.
Iqembu lasekhaya lizohlala liyiqembu lokuqala elinamagama kulo mdlalo futhi iqembu lasekuhambeni lizohlala liyiqembu lesibili eliqokiwe kulo mdlalo. Kubalulekile ukukhumbula lokhu ngoba kwesinye isikhathi amalungiselelo azobanjelwa ezindaweni ezingathathi hlangothi.
Kunemiphumela emithathu engaba khona ebhokisini ngalinye lokubikezela.
• (1) kufanele afakwe uma ubikezela ukuthi iqembu lasekhaya lizonqoba kuleyo ngxenye yalowo mdlalo.
• (X) kufanele afakwe uma ubikezela ukuthi kuzoba ne-draw kuleyo ngxenye yalowo mdlalo.
• (2) kufanele kufakwe uma ubikezela ukuthi iqembu lasekuhambeni lizonqoba kuleyo ngxenye yalowo mdlalo.
Ungenza izibikezelo ezifika kathathu nganoma yisiphi isigamu sanoma yikuphi ukulungiswa, okungu-enter (1), (X) no (2) noma yikuphi okunye kwalokho. Kuzofanele ukhombise iMulti-Play kusiliphu sokubheja.
Amaphuzu ekupheleni kwengxenye ngayinye yemizuzu engu-45 kufaka phakathi isikhathi esingeziwe sonompempe, kodwa ngaphandle kwesikhathi esengeziwe noma ukudonsa amaphenathi, kuzonquma umphumela walesi sigamu.
Kuthiwani uma i-Fixture ilahliwe noma ikhanseliwe?
Uma umdlalo ushiywe, ukhanseliwe, wahlehliswa kabusha noma wahlehliswa ngemuva kokuthi uhlu lushicilelwe kodwa ngaphambi kokuba umdlalo uqale, konke okukhethiwe kwalolo hlelo kuzolungiswa njengokulungile.
Uwathenga Nini Amathikithi eSportStake
Ungathenga amathikithi eSportstake nsuku zonke ngesikhathi samahora okusebenza ajwayelekile womthengisi we-lottery. Ukuthengisa kuzovala isigamu sehora ngaphambi kwesikhathi sokuqala komdlalo wokuqala omenyezelwe.
Kunama-Draw amathathu njalo ngesonto ngokulandelayo.
• Imidlalo ekhishwe ngeSonto, amaFixture aphela ngoLwesibili futhi ama-Draw enzeka ngoLwesithathu.
• Imidlalo(Fixtures) ekhishwe ngoLwesithathu, imidlalo iphela ngoLwesihlanu kanti ama-Draw enzeka ngoMgqibelo.
• Imidlalo(Fixtures) ikhishwa ngoLwesihlanu, imidlalo (Fixtures) iphela ngeSonto futhi ama-Draw enzeka ngoMsombuluko.
Izindleko zebhodi elilodwa zingu-R2 kufaka iVAT. Isilinganiso ongabheja ngaso ngokulingana okukodwa ngu-R2000.
Imiklomelo yeSportStake Jackpot.
Imvamisa, i-ITHUBA yabela u-50% wentengiso ephelele kusuka kumasiliphu wokubheja echibini lomklomelo. Kunezigaba ezine, ezinikezwe isabelo sedamu lomklomelo.
Ukuhlukaniswa Inani lezibikezelo ezifanele Isabelo sedamu lomklomelo
1 16 40%
2 15 20%
3 14 15%
4 13 25%
Abawinile bangaqoqa imiklomelo ngokulandelayo:
Imiklomelo efinyelela ku-R2000 evela kumthengisi we-lottery
Imiklomelo engaphezulu kuka-R2000 kodwa kuze kufike ku-R50,000 kusuka eposini
Imiklomelo engaphezulu kuka-R50,000 evela ehhovisi lesifunda i-ITHUBA